Zvinofanirwa Kuti Zvikwereti Zvitore Zvakamira Panhau Dzemagariro? | Martech Zone
China, May 25, 2017 China, May 25, 2017 Douglas Karr
Mangwanani ano, ini ndatevera chiratidzo paFacebook. Pamusoro pegore rapfuura, kwavo kuvandudzwa kwakapindirana nekurwiswa kwezvematongerwo enyika, uye ini ndanga ndisisade kuona iko kusagadzikana mune kwangu kudya. Kwemakore akati wandei, ndaitaura pachena maonero angu ezvematongerwo enyika. zvakare. Ndakaona sekutevera kwangu kwashandurwa kuita vanhu vazhinji vakabvumirana neni vamwewo vasina kubvumirana vasina kutevedzera uye vakarasa kubatana neni.
Ndakaona makambani andaidanana nawo achienda kure nekushanda neni, nepo mamwe mabhenji achiwedzera kusangana kwavo neni. Kuziva izvi, unogona kushamisika kuziva kuti ini ndachinja kufunga kwangu uye zano. Mazhinji ekuburitswa kwangu kwehukama hwehukama ikozvino kurudziro uye zvine chekuita neindasitiri kwete pane zvemagariro nezvematongerwo enyika. Sei? Zvakanaka, nekuda kwezvikonzero zvishoma:
Ini ndinoremekedza avo vane dzimwe nzira dzekuona uye handidi kuvasundira kure.
Zvangu zvandinotenda hazvinei nemabatiro andinoita avo vandinoshandira… saka sei uchirega zvichikanganisa bhizinesi rangu?
Iyo haina kugadzirisa chero chinhu kunze kwekuwedzera maburi pane kuvhara iwo.
Kuremekedza kusawirirana pane zvemagariro nyaya kwakafa pasocial media. Mabhokisi zvino akazara nekurwiswa kunotyisa uye kurohwa kana chero chinhanho chikaziviswa kana kutonzwisiswa neruzhinji. Zvinenge chero dziviriro kana gakava rinokurumidza kunyura kuenzanisiro yekuparadzwa kana kumwe kudanwa kwezita. Asi ndakanganisa here? Iyi dhata inoratidza kumwe kujekesa kwekuti vatengi vazhinji havabvumirane uye vanotenda kuti mamwe marangi anofanirwa kuve echokwadi uye pachena kutora nyaya dzemagariro.
Iyo Havas Paris / Paris Retail Svondo Shopper Observer yakafukunura matatu mafambiro akamira mukuchinja hukama pakati pevatengesi nevatengi veFrance:
Vatengi vanotenda kuti ikozvino ndiyo basa rechiratidzo kutora chinzvimbo pane zvemagariro.
Vatengi vanoda kuve ndakakomborerwa nemhando dzavanoshanda nadzo.
Vatengi vari kuda zvigadzirwa kuti zviwanikwe zvese zviri zviviri online uye pasina.
Pamwe maonero angu akasiyana nekuti ndave pedyo nemakumi mashanu. Zvinotaridza kwandiri kuti pane kukakavara mune iyo data apo chete chetatu chevatengi vanoda mabhureki kuti vawane zvematongerwo enyika kunyangwe ingangoita yega nyaya yemagariro ichichinja kuita nhabvu yezvematongerwo enyika. Ini handina chokwadi chekuti ini ndoda kubata chiratidzo chinoratidza pachena chimiro chayo pane zvemagariro. Uye zvakadii nezve kukakavadzana munharaunda mamiriro anopatsanura mutengi base? Ini ndinofunga chirevo chekutanga chingangoda kunyorwazve:
Vatengi vanofunga kuti ikozvino ibasa rechiratidzo kutora danho pane zvemagariro ... chero bedzi chimiro chechiratidzo chiri muchibvumirano nemutengi nezve nzira yekuvandudza nzanga.
Ini handina kana dambudziko nekambani chero yega inotsigira nyaya dzehukama, asi ini handigoni kubatsira asi kushamisika kana kusundidzira kwemakambani kutora danho kuchazoshandiswa kuvapa mubayiro kana kuvaranga mune zvehupfumi nekuda kwemaonero avo. Nyaya zhinji dzemagariro ndedzekuzviisa pasi, kwete chinangwa. Izvi zvinoita sekunge kufambira mberi kwandiri - zvinoita sekudheerera. Ini handidi kumanikidzwa nevatengi vangu kutora danho, kuhaya avo vanongobvumirana neni, uye kushandira chete avo vanofunga zvakafanana neni.
Ndinoonga mutsauko wemafungiro kwete pane boka-funga. Ini ndinotenda tarisiro, vatengi, uye vatengi vachiri kuda uye vanoda kubatwa nevanhu kwete pane otomatiki, uye ivo vanoda kupihwa mubairo wega nekuzivikanwa neaya mabhureki avanoshandisa madhora avo avakawana zvakaoma.
Saka, iko kutora kwangu kumira pane ino kupokana here?
Iyo Shopper Yekutarisa Yekudzidza, Pakati peAI nezvematongerwo enyika, kukosha kwechinhu chevanhu kune vatengi, yakaitwa neParis Retail Svondo yakabatana neHavas Paris.
Tags: muchisobrandingHavas Pariskunze kwekutengesaParis Retail Svondo Shopper Mucherechedzizvematongerwo enyikazvitoro zvekutengesazvitoro zvinotengesaretailersmibayiromagariromagariro
Mufananidzo weOmnichannel Consumer Kutenga Maitiro
May 25, 2017 pa 2: 08 PM
Senguva dzose. Mapoinzi akanaka. Ini ndinobvumirana, neshoko rako rakashandurwa reizvo mutengi anoda. Ini zvakare ndinotenda mamwe mabrand anokwanisa kurangwa pachena nezviitiko zvavo, asi madhora anogona kuvatsigira kuburikidza nevamwe vatengi vanobvumirana navo vari vega.
May 30, 2017 pa 12: 09 PM
Zvinyorwa zviviri zvakakosha kubva muchinyorwa chako zvinopfupisa zvandinofunga nezvenyaya iyi, "Nyaya zhinji dzemagariro ndedzekuzviisa pasi, kwete chinangwa" & "Ndinoonga kusiyana kwemafungiro kwete pane boka-kufunga". Ini ndinofunga vazhinji veavo vakaparadzaniswa havanzwisise kuti maonero avo ndeeizvo chaizvo, iwo mafungiro, uye ivo havagone kana havazoteerere kune mamwe maonero kuti vawedzere marefu avo. Ini ndinobvumirana zvizere kuti hapana kambani inofanirwa pachena kusimudzira chimiro chavo pane idzi nyaya, kana ivo vachazotarisana nekudzoka neimwe nzira. Sekambani ndingataure kuti ndine vashandi vane maonero akasiyana nezviyero uye ndinomira kumashure kwerusununguko rwekufunga nekusimbisa vashandi vanobva kumatunhu ese mune zvematongerwo enyika.